Sida loo soo cesho Password-ka Instagram, Raadi Hada! ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sida loo soo celiyo lambarka sirta ah ee "Instagram", Raadi hadda!
January 15, 2019 0 comments 1293
Tirada dadka isticmaala shabakadaha kala duwan ee bulshada ayaa sii kordhaya. Waxaana jira xubno badan oo cusub oo adeegsanaya. Instagram Waa madal soo jiidasho leh, halkaas oo adeegsaduhu ku dhajin karo sawiro iyo fiidiyowyo. Iyada oo loo maro shabakaddan, isticmaaleyaal badan ayaa ku qasbanaanaya inay daabacaan xilliyadooda ugu xusuusta badan. Sababtuna waxay tahay kahor intaanu lumin lambarka sirta ah ee isticmaale, appku wuxuu diyaariyey hannaan ku habboon. Jawaabta sida loo soo celiyo lambarka sirta ah ee Instagram ayaa halkan ah. Waxaa soo baxday, in laga fogaado isticmaaleha oo lumiya alaabtooda oo dhan iyo xasuus qaali ah, shabakadu waa inay lahaato ikhtiyaarka "Waxaan hilmaamay erayga aan galo".
Haddii xisaabinta la sameeyay ay ka kooban tahay inta isticmaaleyaasha weligood illoobeen password qaar ka mid ah shabakadaha bulshada, waxay noqon lahayd tiro aan la qiyaasi karin. Maaddaama dhacdada tani ay aad u badan tahay. Xitaa ka sii badan marka xogta aan si toos ah loogu kaydinin arjiga. Intaa waxaa dheer, haddii isticmaale kasta oo ilaaway lambarkiisa sirta ah waa xaddido gelitaanka Shabakada xaqiiqdii, khalad bay ahaan lahayd. Sababta oo ah dalabka ayaa lumin doona isticmaaleyaal badan iyo kuwa raacsan.
Xusuusnow password Waxay u dhici kartaa sababo aan xad lahayn iyo suurtagal. Ama adoo taleefanka lumay, ama qaab u sameysay. Waxay xitaa sababi kartaa isticmaal yar ama furitaanka isticmaalehaaga moobaylka ama mid kale. Sidaa darteed, ka hor tan noocyo kala duwan oo mowduucyada lGoobta ayaa ahayd inay ogaatay inay suurogal u tahay shakhsigu inuu mar labaad galo xogtiisa. Taasi waa sababta ikhtiyaarka aan ilaaway passwordkayga u jiray gaar ahaan waxtar leh tan iyo markii la bilaabay.
Barxada Instagram waxay la timid qalab a xaqiiji aqoonsiga adeegsadaha. Sidan ayaad u ogolaan kartaa adeegsadaha adeegsashada astaanta u dhiganta. Markaa, tani waxay yareyn doontaa tirada isticmaaleyaasha sii joogaya iyada oo aan la adeegsan barnaamijka ma xasuusto eraygaaga sirta ah Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad ogaato sida loo helo raac badan.
Sida loo soo celiyo lambarka sirta ah ee "Instagram"
Qaababka loo soo celiyo lambarka sirta ee Instagram waa kala duwan yihiin. Qalabka ayaa lahaa inuu hubiyo sax Aqoonsiga Aqoonsiga Taasi waa sababta uu isagu ugu abuuray xeelado kala duwan. Istaraatiijiyadahani wax dhib ah maahan haba yaraatee. Taa baddalkeeda, fudeydkeeda iyo raaxeysigeeda ayaa oggol fududeeyo khibrada in isticmaala marka ay soo kabashada password Instagram ah.
Loogu tala galay isticmaaleyaasha shabakadda websaydhka, waxaa lagu talinayaa in la xusho kombiyuutarka the "xasuusta sirta ah". Markaa iska ilaali inaad marin u hesho shabakada bulshada Si kastaba ha noqotee, hadaad ubaahantahay inaad xasuusato eraygaaga sirta ah, sidoo kale waa la samayn karaa kombiyuutarka.
Sida loo soo celiyo lambarka sirta ah ee Instagram, dhaqan ahaan
Si tan loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan noqon doonta furitaanka app-ka taleefanka. Ama ku guuldareysto taas, bogga degelka ee 'Instagram'. Haddii isticmaaleha uusan haysan arjiga uu yahay aaladiisa moobiilka sabab uun, waa inuu ku dhaqaaqo soo dejinta iyo habka rakibida kahor. Waa inaad sidoo kale awood u leedahay inaad hubiso email inta lagu gudajiro howsha
Tallaabada ugu horreysa ee dib loogu soo celiyo lambarka sirta ah ee Instagram waa fur codsiga, habkan ayaa qaab aasaasi ah lagu soo bandhigi doonaa. Foomkan, waa inaad codsataa Aqoonsigaaga isticmaale iyo lambarka sirta ah ee ay ku jirto.
Ha iloobin Furaha
Kaliya ka hooseeya foomka, tab ayaa soo muuqan doona kaas oo qoraalkiisu tilmaami doono "Ilowsii eraygayga sirta ah". Hadday sidaas tahay, adeegsaduhu waa inuu gujiyaa tab si uu u soo helo lambarka sirta ah ee loo yaqaan "Instagram password".
Ka dib markii la cadaadiyo "Ilowsii eraygayga sirta ah", adeegsaduhu waa inuu is gartaa. Tan waxaa lagu samayn doonaa adoo gelinaya marinka iimaylkaaga ee mashiinka sanduuqa u dhigma. Ka dib markii la geliyo emaylka, adeegsadaha waa inuu riixaa "U dir isku xirka marinka". Tan, waa inaad heshaa emayl, taas oo ay kujirto xiriirin lagu beddelo eraygaaga sirta ah. Oo keydso isbedelada, habkan markii la galo mar labaad waxay noqon doontaa lambarka sirta ah ee ugu dambeeyay.
Sida loo soo celiyo lambarka sirta ee Instagram, qoraal ahaan.
Waqtiga xaadirka ah xaqiijinta ayaa ah aad u kala duwan Intooda badana waa la heli karaa isticmaaleyaasha. Waqtiga casriga ah, isticmaalka taleefanka moobaylka wuxuu u oggolaaday aqoonsiga isticmaalaha in la fududeeyo. Waxaa lagu daray tan, ayaa ah fududeynta iyo fudeyd ee habka dib loogu soo celiyo erayga sirta ah ee loo maro Instagram-ka farriimaha qoraalka.
Fur oo hilmaam
Mar labaad, howsha soo ceshan lambarka sirta ah Instagram iyada oo loo marayo furitaanka dalabka. Sidan, foomka u dhigma macluumaadka isticmaalaha ayaa la soo bandhigi karaa. Kaliya meelaha hoose ee aad buuxinaysid waa inaad ka heshaa tab "Ilowsii eraygayga sirta ah". Adeeggu waa inuu gujiyaa tab, oo isla markaaba waxaa loo jiheyn doonaa bog cusub.
Kadib riix "Ilowsii eraygayga sirta ah" waxaana laguu wareejiyaa su’aalaha cusub. Adeegsaduhu waa inuu ku buuxiyaa sanduuqa la codsaday magacyadooda isticmaalaha. Si aad u riixdo batoonka soo socda iyo liiska xulashooyinka ayaa la soo bandhigi doonaa kahor. Sidaa darteed, shaqsiga waa inuu guji Soo diro SMS" Markaa, kadib waxaad heli doontaa fariin qoraal ah oo tilmaamooyinkeeda ah waa in la raaco si aad u awood ugu yeelato inaad mar labaad u isticmaasho boggaaga.
3 Sida loo soo celiyo lambarka sirta ah ee "Instagram"
4 Sida loo soo celiyo lambarka sirta ah ee Instagram, dhaqan ahaan
4.2 Ha iloobin Furaha
5 Sida loo soo celiyo lambarka sirta ee Instagram, qoraal ahaan.
5.1 Fur oo hilmaam
5.2 Fariin dir
Sida loo monetized your Instagram, Halkan wax ka baro!
Diyaar ma u tahay inaad heesto? Baro weedha ugu fiican ee heesaha Instagram